ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်း အတွက် အီတလီနိုင်ငံမှ ပေးအပ်သည့် အတိုးမဲ့ချေးငွေ ယူရို ၃၀ သန်း အားရယူရန်အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း | Ministry of Planning and Finance
Posted By : td_editor, Date : 27.05.2019 comment
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်း (National Electrification Project: Off- Grid Component NEP-IT) အတွက် အီတလီနိုင်ငံမှ ပေးအပ်သည့် အတိုးမဲ့ချေးငွေ ယူရို ၃၀ သန်း အားရယူရန်အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ၂၀၁၉ ခု နှစ်၊ မေလ (၂၃) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁:၃၀) နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါချေးငွေမှာ အတိုးမဲ့ချေးငွေဖြစ်ပြီး ဆိုင်းငံ့ကာလ (၁၈) နှစ်နှင့် ပြန်ဆပ်ကာလ (၁၀) နှစ်၊ စုစုပေါင်းချေးငွေ သက်တမ်း (၂၈) နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ ချေးငွေစာချုပ်အား အီတလီနိုင်ငံကိုယ်စား Mr. Carlo Segni, Cooperazione & Development (Head). Cassa DepositiePrestiti S.p.A နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုယ်စား စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်၊ ဒေါ်စီစီပြုံးတို့က သဘောတူစာချုပ်အား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
အီတလီနိုင်ငံ အတိုးမဲ့ချေးငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အဆိုပါစီမံကိန်း သည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် အထိ စီမံကိန်းကာလ (၃) ဖြစ်ပြီး ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး (နာဂဒေသ) တို့အတွင်း ကျေးရွာ ၁၀၁၉ ရွာရှိ အိမ်ခြေပေါင်း ၉၆၅၀၀ အား အိမ်သုံးဆိုလာစနစ်၊ အသေးစားဓာတ်အားစနစ်တို့ဖြင့် ကျေးလက်မီးလင်းရေးရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ စိုက်ပျိုး ရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ဖိတ်ကြားထားသည့် အဆင့် မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအီတလီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Ms. Alessandra Schiavo နှင့် Mr. Carlo Segni, Cooperazione & Development (Head). Cassa DepositiePrestiti S.p.A တို့ဦးဆောင်သော တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။